21 အဘို့ရလဒ် pokemon
ခုန်ဖို့ space bar ကိုသုံးသင့်လျော်တဲ့အမြင့်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်တယောက်ကိုတယောက်ပင်မှအသီးခုန်အားဖြင့် Picachu တောင်တက်သစ်ပင်များကိုကူညီပေးပါ။
သင့် task ဆိုသတိမဲ့တစ်ဦးစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့စေနိုင်သောကြောင့်, လုံးဝအပြောင်းအလဲမြန်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များတဲ့လမ်းကြောင်းကတဆင့်ဒီထရပ်ကားကိုမောင်းဖို့ Ash ကိုကူညီဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းဖြင့် pikachu ဖြစ်ကြောင်းသမျှသောအခေါင်းများဖမ်းပြီးမှအမြန် Be
သငျသညျ pikachu ဆိုမကောင်းတဲ့တ္ထုရိုက်ခြင်းမရှိဘဲအဆင့်တိုင်းအတွက်ထွက်ပေါက်ရကူညီရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာတစ်ဦးက Pokemon ပလက်ဖောင်းဂိမ်း။
သင်မျှော်စင်ပေါင်းစပ်မှရလိမ့်မယ်ပိုပြီးမှတ်တစ်ကြိမ်မှာသင်သီးနှံများကိုပိုမိုစိန်ပွင့်ကိုစိန် tower.The တည်ဆောက်ရန်သင့် mouse ကို Move
က Sky ပုံးသင်သည်တတ်နိုင်ကဲ့သို့မြင့်သည်သင်၏ရဲတိုက်တည်ဆောက်ရန်နှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ကိုအထူးပိုကီမွန်လက်ရာသော့ဖွင့်ရန်သင့်အားစိန်ခေါ်တဲ့ stack ပဟေဠိဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Pokemon က Sky အားကစားပြိုင်ပွဲ။ သင်ဤပလက်ဖောင်းကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းထဲမှာ pikachu ဖြစ်ကြောင်း, မိုဃ်းကောင်းကင်မှခုန်ကြိုးစားပါနှင့်အခြားသောအတားအဆီးများအားဖြင့်ဝင်တိုက်တဲ့မရှိဘဲထွက်ပေါက်အမှတ်ကိုကမ်းလိုက်ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
အရာဝတ္ထုကျော်တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ် Ash ကိုအတူစီးနှငျ့သငျကျော် Tipping မပါဘဲမျှမျှတတနေဖို့ဖို့ကြိုးစားအဖြစ်။
Pokemon နှောင်ကြိုးလုပ်ပြီး Buddy
အလားတူဇာတ်ကောင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဆက်သွယ်ထားသောသင့်ရဲ့ mouse ကိုနှင့်အတူတစ်လိုင်းဆွဲပါ။ သငျသညျတူညီသောစာလုံးများကိုခြိတျဆကျမှီတိုငျအောငျသငျသညျ, အချည်းနှီးသောနေရာများကျော်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
Pichu နောက်ကျောကဒီအသစ်စွန့်စားမှုဂိမ်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်ဆင့် comlete ဖို့အားလုံးကိုလျှပ်စစ်ပြက်စုဆောင်းပါ။ သည်အခြား Pokemon ထွက်သည် Watch ။
ဤမြေကွက်-ဟောင်းကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းထဲမှာ pikachu အဖြစ် Play, အခြားအတားအဆီးများအားဖြင့်ဝင်တိုက်တဲ့မရှိဘဲထွက်ပေါက်အမှတ်ကိုကမ်းလိုက်ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ!
ဒီ Pokemon စက်ဘီးစွန့်စားမှု၌သင်တို့တစ်ဦးမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တစ်ဦး Raichu အဖြစ်မောင်းနှင်နေတာပါ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် Explore နဲ့သင်တစ်ဦး motordriver အဖြစ်ကျွမ်းကျင်မှုနေပြပါ။
ဒီ Pokemon စွန့်စားမှုဂိမ်းထဲမှာ Pichu အဖြစ် Play ကိုအဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကြီးမားပြီးပိုမိုအားကောင်းဖြစ်လာမှလျှပ်စစ်ပြက်စုဆောင်းပါ။ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့လုံလောက်တဲ့အားကြီးသော!
Pikachu ကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့် Pokemon အလယ်ဗဟိုမှသွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင် Pokemon အလယ်ဗဟိုမှ Pikachu ကိုရောက်စေဖို့ Ash ကိုကူညီနိုင်မလား? ဒါကြောင့် Pikachu နှင့်ကောင်းသောသွားမယ့်အကြောင်းကြောင့်တက်အလျင်အမြန်သင်မူကား, သင်တို့သည်ဤအခမဲ့အွန်လိုင်းပြိုင်ကားဂရမ်မှာပိုသူ့ကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်မကျဘူးအထဲကစောင့်ကြည့်
အ Pokemon အိမ်ပြန်ကူညီပါ။ သငျသညျအသီးအသီးမျက်နှာပြင်အတွက်ထွက်ပေါက်တံခါးကိုမှသူတို့ကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုသာနည်းနည်းအချိန်ရှိသည်နှင့်အသီးအသီးအဆငျ့စဉ်အတွင်းပိုပြီးရှိရလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ mouse ကိုသုံးပါ။
Pokemon ငါ၏အအုပ်ကြွပ် fix
မူရင်းရုပ်ပုံရဖို့အတိအကျသောနေရာများအတွက် tile ကို slot နှစ်ခုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
Pikachu Ash ကိုမှတစ်ဦး Pokemon ကောက်ခံရေးစွန့်စားမှုအပေါ်ပို့ပြီးပါပြီ! တကျွန်းတနိုင်ငံသားတဆင့် Poke Truck ကားမောင်းနှင့်သင်ဖြစ်နိုင်သည်ဒီပျော်စရာမောင်းနှင်မှုဂိမ်းအတွက်တတ်နိုင်သလောက်အများအပြား Pokemon ကိုစုဆောင်းပါ။ ထိုထရပ်ကားကိုမောင်းနှင့်ပျော်စရာရှိသည်ဖို့သင့် ARROW keys ကိုသုံးပါ!
Thor အာကာသကနေလာမယ့်အဂြိုလ်သားများနှင့်ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားကနေကမ္ဘာက save ကိုကူညီပါ။ သင့်ရဲ့မောက်စ်သို့မဟုတ်မြှားခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။
ben 10 - hidden ဂြိုလ်သား
ဘင် 10 ဓါတ်ပုံတွေသောက hidden ဂြိုလ်သားကိုရှာပါ။ ဂိမ်းအသီးအသီးဇာတ်စင်၏အခက်အခဲများ၏ဒီဂရီတိုးလာ။
Johnny စမ်းသပ်: ပင်လယ်အင်အားသုံး
ဂျော်နီနက်ရှိုင်းသောစူးစမ်းဖို့သမုဒ္ဒရာအောက်မှာငုပ်, ဒါပေမယ့်ဗုံးနှင့်အသားစားငါးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဂျော်နီရှားငါးလိုက်ဖမ်းသဖြင့်မိမိအလေ့လာရေးခရီးပြီးစီးခဲ့နှင့်ပင်လယ်အတွင်းဗုံးကိုရှောင်ရှားကိုကူညီပေးပါ။
mouse ကိုအတူ Pooh နဲ့သူ့ friend.Move Pooh နှင့်အတူဘေ့စ်ဘောပွဲစဉ် Play ။ , ဘောလုံးပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိ Keep ယူရည်ရွယ်ထားနှင့်လွှဲဖို့ကိုနှိပ်ပါ။ တကယ်ကပျံသန်းဖြစ်စေခြင်းငှါလင်းနို့၏အလယ်တွင်နှင့်အတူဘောလုံးကိုထိဖို့ကြိုးစားပါ!
သူမဖွင့်ဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ချစ်သောသူသောကွောငျ့မိန်းကလေးများ, ဟယ်လိုမာရီယာရဲ့အကြိုက်ဆုံးအားလပ်ရက်ပါ! ဤနှစ်တွင်သူမအများကြီးဟယ်လိုပါတီများသွားနှင့်အသီးအသီးအဘို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကြည့်ရှုရှိသည်ဖို့လိုလားလိမ့်မည်။ သူမ၏ဗီရို couture ဝတ်စုံ, ပျော်စရာ wigs နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်ဝ၏။ ဟဲ